तपाई होली खेल्दै हुनुहुन्छ ? रसायन मिसाएका रंगले स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउछ – Vision Khabar
तपाई होली खेल्दै हुनुहुन्छ ? रसायन मिसाएका रंगले स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउछ
। १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार २०:२२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सिन्दुर, अबिरका साथै अन्य रंग दलेर सुख, स्वास्थ्य, समृद्धिको कामना गर्दै होली पर्व मनाइन्छ । तर यही पवित्र पर्व होलीमा वनस्पति रंङ्गहरुको स्थानमा रासायनिक रंगहरुले स्थान बनाउँदा स्वास्थ्य समस्याको प्रश्न पनि जोडिन पुगेको छ ।
रासायनिक तत्वबाट रंग बनाउनु र कडा रंग निकाल्न प्रतिवन्धित पदार्थ मिलाउनुले होली जस्तो पवित्र पर्व स्वास्थ्य नासको अग्निकुण्ड बन्दै गएको बिशेषज्ञहरुको कथन छ ।
होलीमा उपयोग गरिने रंग, अबिर आदिमा प्रायः खतरनाक रसायन मिसाइएको हुन्छ । त्यसैले रंग वा अबिर मुख, आँखा वा कानमा नपसोस् भनेर होशियार रहनुपर्छ । र रंगको चयन गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन वरिष्ठ छाला रोग बिशेषज्ञ डा अनिलकुमार झाको सुझाब छ ।
नब्बे प्रतिशत घुलनशील रंग बनाउन स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने डाइहरु प्रयोग गरिन्छ। सुख्खा रंग बनाउन सिसा, मरक्यिुरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तत्व प्रयोग गरिन्छ । यसरी बनाइएका सुख्खा रंगमा एस्वेस्टस र सिलीका जस्ता तत्व पनि हुन्छ ।
यी तत्वले आँखा र छालाको संक्रमण गर्नुका साथै दम, खोकी जस्ता रोग जन्म दिन्छ । सस्तो सामग्रीबाट रङ्ग बनाउन पेट्रोलियम उत्पान, डिजल इन्जिन तेल, सिसाको धुलो हाल्नाले छाला, रगत, मृगौलाको संक्रमण हुन्छ । त्यस्तै कलेजो, मस्तिष्क र आँखा जस्ता कोमल अंगहरु दुर्बल बन्छन् ।
टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्या देखा पर्छ । घुलनशिल रंगमा प्रायः जेनशियन भायोलेट भन्ने विषाक्त तत्व मिलाइएको हुन्छ। यसले छाला चिलाउने एलर्जी हुने, फोकाफोकी आउने, छालाको रङ्ग खुइलिने, डर्माटाइटिस जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्ने र बर्षेनी होली पछि छाला रोग विशेषज्ञको समस्या लिएर आउनेको संख्या वृद्धि हुने गरेको बिशेषज्ञहरुको अनुभब छ ।
होलीमा कसैकसैले प्रयोग गर्ने चाँदी जस्तो सेतो एल्मिुनियमर ब्रोमाइडले क्यान्सर, रातो र मरक्युरी सल्फेटरले छालाको क्यान्सर, प्यारालासिस, अन्धोपनसम्म हुन् सक्छ त्यसैले यस्तो केमिकल प्रयोग गरेर होलीलाई धमिलो नबनाउनु राम्रो हुने बिशेषज्ञको सुझाब छ ।
रंग खेल्दा सचेत भइयो भने होलीको रौनक पनि रहिरहन्छ, रंग जथाभावी खेल्दा आँखाको दृष्टि गुम्न सक्छ, कानको जाली फुट्न सक्छ रङ, अबिर, लोलाले आँखालाई सबैभन्दा बढी नोक्सान पु¥याउँछ ।
लोलाका कारण आँखाको दृष्टि गुमेको, रङ वा अबिर आँखाभित्र गएर दृष्टि प्रभावित भएका घटना धेरै छन् ।